Hordhaca Kulanka Real Sociedad vs Real Madrid (Wax walba aad ugu baahan tahay) | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhaca Kulanka Real Sociedad vs Real Madrid (Wax walba aad ugu baahan tahay)
Hordhaca Kulanka Real Sociedad vs Real Madrid (Wax walba aad ugu baahan tahay)
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 21-08-16 8:47 AM Tababare Zidane ayaa hogaaminaya Real Madrid kulankii ugu horeeyay kulamada furitaanka La Liga madama uu xili ciyaaredkii hore kusoo dhex dhacay horyaal meel dhexe maraya, balse markaan wuxuu doonayaa inuu si buuxa u dagaalamo inkastoo uu ciyaartoy muhiim ah waayay kulanka furitaanka.
Los Blancos sanadahii ugu dambeeyay wey ku fashilantay iney ku guuleysato La Liga waxaana ugu dambeysay 2011-2012 markaas oo uu u qaaday Jose Mourinho, afartii xili ciyaareed ee ka dambeysayna sadex ka mid ah Barcelona ayaa ku guuleystay halka midka kalana ay qaaday Atletico Madrid.
Zidane ayaana xooga saari doona inuu abaarta kooxdiisa ka heysata dhankaas soo afjaro xagaagan sidoo kalana kooxda waxey isha ku heysaa iney difaacato koobka horyaalada yurub ee Champions League.
Kulanka: Real Sociedad vs Real Madrid
Tartanka: La Liga (Week 1)
Garoonka: Anoeta Stadium
Saacadda: 9:15 Habeenimo (XGA)
Garsoore: Juan Martinez (Spain)
La Real kooxda lagu neynaaso ayaa weyneysa xidigooda ugu muhiimsan Imanol Agirretxe kaas oo dhaawac ku seegi doona ciyaaraan. Juanmi ayaana kusoo bilaaban kara dhanka weerarka.
Daafaca dhexe Inigo Martinez ayaa rajeynaya inuu kusoo bilowdo inakstoo uu dhibaato dhaawac yar qabo, sidoo kalana waxaa aad loo hadal hayaa inuu Geronimo Rulli goolka kusoo bilaaban doono.
Real Madrid waxaan taam buuxa u aheyn weeraryahanada BBC-da loo yaqaano kaliya Bale ayaana kasoo muuqan kara ciyaartaa kaas oo lagu daray liiska ciyaartoyda u safartay Sociedad waxaana dhaawacyo looga reebay Ronaldo iyo Benzema.
Sidoo kale Real Madrid waxey kulankaan weyneysaa Keylor Navas, Pepe iyo Luka Modric oo ganaax ku seegaya kulankaan.
Wiilasha da’da yar Alvaro Morata iyo Marco Asenio ayaa fursad fiican heli doona caawa kuwaas oo ka faa’ideysan doona maqnaashiyaha Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo iyagoo Bale la wadaagi doona weerarka.
Dhanka kale James Rodriguez ayaa laga yaabaa inuu fursad helo madama uu kooxda ganaax kaga maqanaan doono Luka Modric kulanka caawa.
Real Madrid ayaa guul gaartay 12-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka La Liga.
Real Madrid ayaa badisay 13-kulan oo ka mid ah 15-kii kulan ee ugu dambeeyay oo wajahday Real Sociedad dhamaan tartamada oo dhan.
Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan 2-gool, 11-ka mid ah 12-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaarto La Liga.
Shaxda Labada dhinac :